COVID-19 Lockdown agbatịkwuru na Australia si Victoria | Australia njem ozi ọma
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Australia njem njem » A gbachiri mkpọchi COVID-19 na Australia nke Victoria
A gbachiri mkpọchi COVID-19 na Australia nke Victoria
Ọstrelia agbatịala mkpọchi maka Victoria.
Agaghị ebuli mkpọchi ụbọchị ise dị ka atumatu ya.
Andrews ekwupụtaghị oge ole nkwụsị ọrụ ga-adịgide.
Ọhụrụ ndị achọpụtara na steeti adaala nwayọ n'ime ụbọchị ole na ole gara aga, na-enyefe naanị mpaghara 13 na-enyefe na Monday.
Ndị ọchịchị obodo nọ na AustraliaVictoria kwuru na mkpọchi nke ise COVID-19 nke steeti nyere iwu ka ọrịa ahụ gbasaa, nke ga-agwụ na Tuesday, ga-agbatị ruo mgbe ebighi ebi.
Agaghị ebuli mkpọchi ụbọchị ise ahụ ka akwadogoro, onye isi ala nke Victoria steeti bụ Daniel Andrews kwuru taa.
“Ọ ga-abụ ma eleghị anya ụbọchị ole na ole nke anwụ na mgbe ahụ na e nwere nnọọ nnukwu ohere na anyị ga-azụ ke lockdown ọzọ. Nke ahụ bụ ihe m na-agbalị izere, ”ka o kwuru, na-ata ụta na-aga n'ihu nke mkpọchi na Delta variant nke coronavirus.
"Amaara m na nke a abụghị akụkọ ndị mmadụ chọrọ ịnụ mana ị ga-eme ihe ziri ezi, ihe a na-aga ngwa ngwa, ọ na-ama aka, ọ na-agbanwe agbanwe."
Andrews ekwupụtaghị oge ole nkwụsị a ga-adịgide, na-ekwe nkwa inye nkọwa ndị ọzọ banyere mkpebi ahụ na Tuesday.
Victoria AustraliaObodo nke abụọ kacha nwee ọnụ ọgụgụ, nke gụnyere obodo Melbourne, banyere ụbọchị ise ịgbachiri izu gara aga mgbe nchọpụta nke aka ole na ole na-akpata ọrịa coronavirus, yana Delta dị iche iche a na-ebugharị ebugharị kwenyere na e si na steeti agbata obi ya. South Wales.
Ihe omuma ohuru nke achoputara na steeti adaala nwayọ n’ime ubochi ole na ole gara aga, naani ihe nfefe iri na ato n’ime obodo ka ekwuputara na Mọnde, gbadata site na 13 n’otu ubochi mbu. N'agbanyeghị nke ahụ, ndị ọchịchị ahụ ewerewo ọnọdụ ahụ siri ike nke ga-eme ka ịgbachi nkịtị.
Mkpọchi ugbu a bụ nke ise na Victoria kemgbe mbido ọrịa a - na nke atọ n'afọ 2021 naanị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke nde mmadụ 25 nke Australia bi n'ụlọ ha, na mkpọchi na-aga n'ihu na obodo Sydney, nke ọtụtụ mmadụ nwere, nke Delta dị iche iche na-eti.
Ntughari ugboro ugboro nke mgbochi mgbochi coronavirus siri ike karịa ole na ole COVID-19, agbanyeghị, ekwela ka ndị ọchịchị Australia mee ka ọrịa a na-achịkwa nke ọma. Kemgbe mmalite nke ọrịa ahụ, mba ahụ edebanye aha ihe dịka 32,000, ebe ihe karịrị mmadụ 900 na-arịa ọrịa ahụ.